घुमन्तेलाई लोभ्याउने सिन्तीको सुन्दरता - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
घुमन्तेलाई लोभ्याउने सिन्तीको सुन्दरता
२०७८ श्रावण, १५ शुक्रवार
सिन्ती झरनाको सुन्दरताले नलोभिने सायदै होलान् ।
घुमन्तेलाई यो झरनाले साँच्चैको लोभ्याउँछ । चितवनको कालिका नगरपालिका–९ रहेको यो झरना नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ ।
अहिले कोरोना र लकडाउन छलेर पनि मानिसहरु त्याहाँ पुगे ।
कोही गर्मि छल्न, मन बहालाउन सिन्तीको चिसोले तपाईलाई सम्झिरहन्छ सम्झाईरहन्छ । पानीमा घण्टौंसम्म रमाउन तपाईलाई कसैले छेक्दैन । बसिरहन मन लाग्छ। यसैले सबैलाई यो झरानाले लोभ्याइरहन्छ ।
महाभारत पर्वत श्रृंखलाअन्तर्गत सिन्ती खोलाको मुहानबाट निस्किएकाले यसलाई सिन्ती झरना भनिएको स्थानीय बताउँछन् । चिसो र मनोरम ठाउँ र दूरीका हिसावले पनि नजिक भएपछि कोरोना कहरका बीच पनि आन्तरिक पर्यटक सिन्ती पुग्ने गरेका छन् ।
करिब ४० मिटर र चौडाइ करिब ७ मिटर रहेको यो झरना सेताम्मे कुहिरो जस्तै झर्छ । सिम्ती वरपरको हरियाली सुन्दरता उत्तिकै मनमोहक छ ।
सिम्तीमा मोटरबाटो पुगेको छैन । सिम्ती पुग्न ४० मिनेट उकालो हिड्नुपर्छ तर सिम्तीको सुन्दरताले भने त्यो उकालो बिर्साइदिन्छ । पहाड फोरेर झरेको सिम्ती तल्लो तहमा पोखरी छ । जहाँ बालबालिका रमाउँछन् ।
कसरी पुग्ने सिम्ती ?
चितवनको कालिका नगरपालिका–९ मा रहेको यस झरना जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट झण्डै २४ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । सिम्ती पुग्न कतै ठाडो उकालो, कतै तेर्सो बाटो पार गर्नुपर्छ कालिकाको शक्तिखोर–सिद्धि सडकखण्डअन्तर्गत दोगराबाट साढे दुई किलोमिटरको पैदल यात्रापछि सिन्ती झरना पुगिन्छ । सिन्ती झरनासम्म मोटर बाटो पुगेको छैन । यहाँको मोटर बाटोबाट ४० मिनेट उकालोे हिँडेपछि झरना पुगिन्छ ।
नयाँ पुस्ताको आकर्षण
सिम्तीमा पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको कालिका–९ का वडाध्यक्ष हेमबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार युवायुवती यहाँ आएर गर्मी छल्नेदेखि तस्वीर लिने, टिकटक बनाउने तथा भिडियो लिने गर्दछन् । सिन्ती झरनाको प्रचारप्रसार हुन थालेपछि यहाँ पर्यटक आउन थालेको उनको भनाई छ। “भरतपुर, रत्ननगर, गैँडाकोट, खैरहनी, सौराहा, हेटौँडा, तनहुँसम्मका आन्तरिक पर्यटक झरना हेर्न तथा नुहाउन आइरहेका छन्”, उनले भने, “यतिबेला दैनिक २०० को हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक झरनामा आउँछन् ।”
कोरोना महामारीका कारण लामो दूरीका पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने वातावरण नहुँदा युवापुस्ताको आकर्षण स्थानीय सिन्ती झरनामा बढिरहेको वडा सदस्य लालबहादुर गुरुङले बताए । “चार वर्षअघिसम्म यसको खासै चर्चा थिएन, जनप्रतिनिधि आएपछि झरनाको प्रचार हुन थालेको हो । त्यसपछि आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका हुन्”, गुरुङले भने ।
सौराहाबाट पथप्रदर्शक र केही आन्तरिक पर्यटक लिएर झरना पुगेका पर्यटन व्यवसायी विजय लामाले झरना अत्यन्तै आकर्षक र सुन्दर रहेको बताए । उनले भने, “यसले आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन, भोलिका दिनमा सौराहा आउने बाह्य पर्यटकलाई पनि लोभ्याउन सक्नेछ ।”
उनले माथि डाँडाबाट आएको चिसो पानीमा नुहाउँदा आनन्दको महसुस हुने बताए । गर्मी छल्न र मन बहलाउनका लागि उक्त झरना पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने र यसले आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन, विदेशी पर्यटकलाई समेत लोभ्याउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
उनले भने, “सौराहाबाट पर्यटक लैजान सकिन्छ, तर त्यहाँ उद्यान, होटल, खानेपानी र शौचालयको राम्रो प्रबन्ध हुन जरुरी छ, बाह्य पर्यटकले सुरक्षित महसुस गर्नलाई त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी बिटको स्थापना गर्नुपर्छ ।”
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी अच्युतराज रेग्मीले गुरुयोजना बनाएर झरनाको विकास र प्रचारप्रचार गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार झरनाको गेट निर्माण, बाटोघाटो सुधार, सरसफाइ, विश्रामस्थललगायतका संरचना निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना बनाउन लागिएको छ । झरनास्थलसम्म बिजुली बत्तीको व्यवस्था, झरना जाने पैदलमार्ग सुधार, व्यवस्थित शौचालय निर्माण गरी यसको प्रचारप्रसारसम्मको भूमिका बढाउने गरी योजना तयार पारिरहेको उनले बताए । उनले भने, “यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाउँदैछ ।”
# सिन्ती झरना # घुमफिर
भ्याक्सिन लगाएका र पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ भएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था नगर्न परिसंघको जोड
पर्यटक कुँर्दैछन् सहस्राब्दी पदमार्गका व्यवसायी
पर्यटकिय मौषममा होटलमा छैन उत्साहः धमाधम बुकिङ रद्द ?
निगमले नयाँ दिल्ली दैनिक उडान गर्ने, दशैँको अवसरमा यात्रुलाई राहत !
पर्यटक भित्र्याउन तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रमा ‘टुरिस्ट हाउस’ निर्माण